နေအိမ်/ညွှန်ကြားချက်/ပျက်စီးသွားသော Excel ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပြုပြင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Excel အတွက် Stellar Repair လိုင်စင် ၃ ခုကိုပေးအပ်သည်
Vangelis5 ။ အောက်တိုဘာလ 2020
Microsoft Excel သည်ယနေ့ခေတ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ spreadsheet program ကိုရုံးခန်းတွင်သာမကသုံးစွဲသူများစွာလည်းပုဂ္ဂလိကကဏ္programတွင်ထို program ကိုသုံးကြသည်။ Microsoft Excel ဖြင့်သင်ရှုပ်ထွေးသောတွက်ချက်မှုများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းကော်လံ၊ မျဉ်းတန်းသို့မဟုတ်ဘားဇယားကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောပုံကားချပ်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အလွန်ကျယ်ပြန့်သောဖော်မြူလာများကြောင့်စားပွဲများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ ကလစ်အနုပညာနှင့်အခြားအရာများထပ်ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် Excel ဖိုင်ပျက်စီးတဲ့အခါမင်းဘာလုပ်မလဲ။
ပျက်စီးနေသော Excel ဖိုင်များကိုအခမဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သလား။
1 ပျက်စီးနေသော Excel ဖိုင်များကိုအခမဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သလား။
2 ပျက်စီးသွားသော Excel ဖိုင်များကိုပြုပြင်ပါ
3 MS Excel ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးကိရိယာ
4 install လုပ်ပြီးလျှောက်ထားပါ
5 Excel raffle အတွက်ပြုပြင်ပါ
အောက်ပါတို့၌ပျက်စီးသွားသော Excel ဖိုင်အားမည်သို့ပြန်လည်ပြုပြင်နည်း (သို့) မည်သို့ဖြေရှင်းနည်းအချို့ကိုသင်မိတ်ဆက်မည်။
ဖြစ်လာတယ် Excel ဖိုင် မတော်တဆဖျက်မိသည် (သို့) Excel ဖိုင်တစ်ခုနှင့် မသိသောအမှားပျက်စီးသွားသည်မရ။ ထို့ကြောင့် Excel သည်သင့်အားကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ Microsoft သည်၎င်း၏ Excel ပရိုဂရမ်တွင်အလုပ်လုပ်သောပြုပြင်မှုဟောင်းကိုပေးသည် ပျက်စီးသွားသောအလုပ်စာအုပ်များကိုပြုပြင်ပါ ပြန်ပေး။
မှားယွင်းသော Excel ဖိုင်ရှိသူများသည်အောက်ပါအမှားသတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိလေ့ရှိသည်။
Microsoft Excel အလုပ်မလုပ်တော့ပါ
မမျှော်လင့်ဘဲ Excel ဖိုင်ပျောက်နေသည်
ဖိုင်သည်ပျက်စီးသွားပြီးဖွင့ ်၍ မရပါ
Excel သည်ဖတ်။ မရသောအကြောင်းအရာ (filename) တွင်တွေ့သည်
xls ဖိုင်ကို သုံး၍ မရပါ။ ဖိုင်ကိုစာဖြင့်ရေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်
ပျက်စီးသွားသော Excel ဖိုင်များကိုပြုပြင်ပါ
Excel ကိုပရိုဂရမ်တစ်ခုပြုလုပ်သည့်အခါဤနည်းအတိုင်းပြုလုပ်သည် Excel စာအုပ် ၎င်းကိုတိုက်ရိုက်နှင့်အလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုသည် ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးပုံစံ စတင်သည်။ ဤပုံစံသည်ဖိုင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသည်။
သို့သော်ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးနည်းလမ်းမစလျှင်သင်၏အလုပ်စာအုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ယူရန်ကြိုးစားပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, စတင်ပါ Microsoft Excel-
၁။ အပေါ်ဆုံးတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ ဖိုင် ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါ ဖွင့်တယ်။
2. ကိုသွားပါ။ ဖိုလ်ဒါ၊ ပျက်စီးသွားသောစာအုပ်
၃။ ဖိုင်ကိုရွေး။ ဖိုင်ကိုကလစ်ပါ Pfeil Open ခလုတ်ဘေးမှာ
4. ရွေးပါ ဖွင့်ပြီးပြုပြင်ပါ ... ဖြစ်ကာ
Microsoft နှင့်ပေါင်းစည်းသည် Excel ကိုပြုပြင် function ကို အသေးစား Excel ပျက်စီးမှုများကိုသာပြုပြင်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာဘဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုဟာမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုများလာတယ်။ ဒါဆိုရင် Professional တွေအတွက်ဒါတွေကသင့်တော်ပါတယ် Excel ကယ်ဆယ်ရေးဆော့ဝဲ
MS Excel ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးကိရိယာ
ဟုတ်ပါတယ်၊ ချို့ယွင်းချက်ရှိသောအသုံးပြုသူများကိုကူညီသောစျေးကွက်တွင်ပြန်လည်နာလန်ထူဆော့ဝဲများကိုပံ့ပိုးပေးသူများစွာရှိပါသည် Excel ဖိုင်များ (.XLS / .XLSX) ကိုပြုပြင်ပါ။
ဤပံ့ပိုးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Excel ကိုများအတွက်ကြယ်ပြုပြင်ခြင်းအမှားအနည်းငယ် (သို့) ပျက်စီးသွားသော Excel စာအုပ်များကိုကလစ်အနည်းငယ်နှင့်အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိဘဲပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၏ဂုဏ်သတ္တိများ Excel အတွက်ပြုပြင်ခြင်း
Excel error အားလုံးကိုပြုပြင်ပေးသည်
ပျက်စီးနေသော XLSX နှင့် XLS ဖိုင်များကိုပြုပြင်သည်
ဇယားများ၊ ဂရပ်များ၊ ဇယားကွက်များ၊ ဆဲလ်မှတ်ချက်များ၊ ပုံများ၊ ဖော်မြူလာများ၊ အမျိုးအစားများနှင့်စစ်ထုတ်မှုများ
MS Excel ဗားရှင်းများကိုထောက်ပံ့သည်
တင်လိုက်ပါ Excel ကိုများအတွက်ကြယ်ပြုပြင်ခြင်း ထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကနေ
တပ်ဆင်ပြီးနောက် Excel ဖိုင်များကိုရွေးနိုင်သည်
Excel Repair software တွင် Excel ဖိုင်များစွာကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပျက်စီးသွားသော XLS သို့မဟုတ် XLSX ဖိုင်ကိုရှာပါ
ဖြစ်ဖြစ်ချင်း Excel အတွက်ပြုပြင်ခြင်း ပြီးပါပြီ၊ သင်၏ဖိုင်ကိုညာဘက်ဝင်းဒိုးတွင်ကြည့်နိုင်သည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အပေါ်မှကလစ်နှိပ်ပါ "ဖိုင်သိမ်းရန်"
MS Excel ဖိုင်တစ်ခုသည်အလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းသည်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်တကယ်အရေးကြီးသောစားပွဲများသို့ရောက်သောအခါ၎င်းတွင်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်ကိုသိရန်ကောင်းသည် ပျက်စီးသွားသော Excel လက်စွဲစာအုပ်ကိုကယ်တင်ပါ။
Microsoft တင်မကဘဲပျက်စီးသွားသော Excel ဖိုင်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရလွယ်ကူစေရန်ပရိုဂရမ်များစွာပေးသောအခြား software ပံ့ပိုးပေးသူများလည်းရှိသည်။ ငါတို့မိတ်ဆက်ခဲ့သော Stellar Excel Repair မှပြန်လည်ရယူရေးဆော့ဝဲနှင့်တူသည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအနည်းငယ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်၌ Stellar Excel Repair သည်သင်၏ Excel ဖိုင်အားအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ပြန်လည်ရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Raffles Excel အတွက်ပြုပြင်ခြင်း
ငါတို့ကပေးတာကွာ3ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ Excel ကိုများအတွက်ကြယ်ပြုပြင်ခြင်း
မသိမ်းရသေးသော Excel ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူပါ၊ ဒါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
Service Pack 1 ကို Windows Vista DVD တွင်ပေါင်းစည်းပါ
SSD ကိုမစစ်ဆေးပါ၊ ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ - အချက် ၆ ချက်
Firefox 69 - Bookmark folder သည်မီးခိုးရောင်ပြန်ဖြစ်သွားသည်
Outlook အီးမေးလ်ပူးတွဲပါဖိုင်များကိုလည်းထုတ်ယူသည်၊ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
အပို software မပါဘဲဘယ် mainboard ကို install လုပ်ထားလဲကြည့်ပါ
Firefox New tab စာမျက်နှာနောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ
သိုလှောင်ရန်နေရာအလုံအလောက်ရှိသော်လည်း USB stick သည်ဖိုင်အလွန်ကြီးသည်
0x80071ac3 အမှား - ဖိုင်များကိုကူးနေစဉ်
Windows 8 ဖွင့်ထားသော program / app များကိုပိတ်ပါ
ပျက်စီးသွားသော excel ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ ပျက်စီးသွားသော excel file ကိုပြုပြင်ပါ ပျက်စီးနေသော Excel ဖိုင်များ Excel အတွက်ပြုပြင်ခြင်း